ပုံဆိုဒ်လျှော့နည်း (2MB -> around 600KB) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပုံဆိုဒ်လျှော့နည်း (2MB -> around 600KB)
ကျွန်တော်တို့ အခု digital camera တွေနဲ့ ရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတော်တော်များများက တော်ရုံတန်ရုံ resolution နဲ့ ရိုက်တာတောင် ဆိုဒ်ကြီးတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ ပို့ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် memory stick နဲ့ သယ်သွားချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဆိုဒ်ကြီးနေတော့ ၀န်ကျယ်ပါတယ်။ ဒါကို အလွယ်ကူဆုံး လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဓာတ်ပုံဆိုဒ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဆိုဒ်လျှော့ချချင် ပုံကို paint နဲ့ဖွင့်။ pic(the picture which you want to reduce the size) -> right click ->Open with -> paint
ပြီးရင် ပြန် save(ctrl + s)။ ဒါမှမဟုတ် တခြားနေရာမှာ ပြောင်းထားချင်တယ်ဆိုရင် save as နဲ့ save။
ဒါဆိုရင် တရုတ်သိုင်း ၀တ္တုများထဲကလို မည်သို့ မည်ပုံ လုပ်လိုက်သည်မသိ။ 2MB လောက်ရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံများ 600KB လောက်သို့ လျှော့ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံဆိုဒ် သေးအောင် အလွယ် ချုံ့နည်း
ဒီနည်းကတော့ ဓာတ်ပုံကို paint သုံး၍ အလွယ် ချုံ့နိင်တဲ့ နည်းပါ။ ချုံ့ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံကို paint နဲ့ဖွင့်။ ပြီးရင် Image ထဲက Stretch and Skew ကို ရွှေး။ Stretch ရဲ့ Horizontal နဲ့ Vartical မှာ လျှော့ချ ချင်တဲ့ အရွယ်အစားလိုက် percentage % တွက်ပြီး နှစ်သက်သလို ချုံ့၊ ချဲ့ နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဓာတ်ပုံကို တစ်ဝက်လောက် သေးသွားစေချင်တယ်ဆိုရင် 50% လောက်ဆီထားပြီး ok နှိပ်လိုက်ရင် တစ်ဝက်လောက် သေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ ပါတဲ့ Skew ကတော့ ဓာတ်ပုံကို စောင်းချင်တဲ့ degree လိုက် တွက်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 30 ဦးတို့မှ yeman အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, ဆန်းမောင်, ဆွိ, ဇာနည်စိုး, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖိုးထိန်, ဖယောင်း, မွန်ကြီး, ဟိန်းသူအောင်, အိမ့်ဖြူ, ဇေယျာမင်းထက်, တော်ဝင်ကျား, မေထူးမောင်, အေးဇော်ဆွေ, မြန်အောင်သား, နှင်း, alicia5556, aunglinn, g00gle, kingofvirus, kokomaung.ko28, MegaWooer, minthike, mmkyioo, nanda, nandarnaing007@gmail.com, phoetharlay, Starfire, thetzin, tree lover
ပို့စ် 19 ခုအတွက် 75 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ပုံဆိုဒ်လျှော့နည်း (2MB -> around 600KB)
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ့..ကိုရဲမာန် ရဲ့ ကမ္ဘာငယ်က ဘယ်နေရာမှာတည်ရှိလဲဆိုတာ.. မြေပုံညွှန်းလေးတဆိတ်လောက်ပေးပါခင်ဗျား....
Find More Posts by ကိုဇေ
Originally Posted by ကိုဇေ
ပုံဆိုဒ်လျှော့နည်းလေးကတော့ အများကြီး ဝေးဝေးကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ Microsoft Office Picture Manager နဲ့တင်ချုံလို့ရပါတယ်။ပုံတစ်ပုံကို Picture Manager နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒါပြီးရင်အပေါ် toolbar မှာ EditPicture ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ဆုံးညာဘက်မှာchange Picture size အောက်က Compress Picture ကိုနှိပ်ပါ။ Compress Picture Setting မှာ မိမိသုံးလိုတဲ့ အမျိုးအစားကိုရွေးပေါ့။ ပုံမှန်အားဖြင့်2mb လောက်ဟာကိုလျှော့ချင်ရင် Document ကိုရွေးပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ အောက်က Estimated total size မှာ Original Size နဲ့ Compress လုပ်ပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုက်ကိုပြပါတယ် ။ အိုကေပြီဆိုရင်တော့ OK ပေးပေါ့ပြီးရင်တော့ save လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပုံတစ်ခုကို အလွယ်ကူဆုံး အပေါ့ပါးဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ ချုံနိုင်ပါပြီဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ နုမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, မေထူးမောင်, kingofvirus, kokomaung.ko28, nanda, thetzin
ကိုနုမောင် ပြောသလိုလည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းက ပုံ အရွှ့ယ်အစားရော၊ အရေအသွေး ပါ မပြောင်းလဲပါပဲ size ပဲ လျှော့သွားတာပါ။
အနည်းဆုံး (2MB -> around 600KB) လျှော့ကျသွားပါတယ်။
ဇာနည်စိုး, မေထူးမောင်, thetzin
ဟုတ်ပ ကိုရဲမာန် ရာ....မည်သို့ လုပ်လိုက်သည်မသိပါပဲ
နောက်လည်းအခုလို trick လေးတွေသိရင်ပြောပြပါအုံးဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ jurassic အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တည်နေရာ: i live in mandalay now.
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 19 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒါပေမယ့်အကိုရာ ပုံဆိုက်လျှော့တာတော့ ဟုတ်ပါပီ။ သူများဆီကိုမေးလ်ပို့တာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ တခုပဲအဆင်မပြေတယ်။ မေးလ်ပို့ခံရသူပြန်ကြည့်တဲ့အခါ သေးသေးလေး မြင်ရတာပါပဲ။ ကျနော်တော့ ဒီလောက်ပဲ နားလည်ပါတယ်။
Visit ကိုသောင်း's homepage!
Find More Posts by ကိုသောင်း
13-01-2010, 01:55 PM
ကိုသောင်းရေ မေးပို့ခံရသူက ပုံကိုအကြီးကြီးပြန်မြင်ချင်ရင် ပုံဘေးမှာပါတဲ့ view နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီးရင် zoom ခေါ်ပြီးကြည့်ပါ ကူးယူသွားချင်ရင်လဲ အကြီးကြီးချဲ့ပြီးမှကူးယူပါဒါဆိုပြန်ကြည့်ရင်အကြီးကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နှင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျေးဇူးပါနော် ကျွန်တော် ပိုတိုဆော့လုပ်တုန်းကပုံအရွယ်အစားကိုမလျှော့တတ်လိုတော်တော်လေးပြသနာတက်နေတာ ခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဗျာ..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ alwslov အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by alwslov
အောင်မလေးရှာနေတာကြာပေါ့ ကိုရဲမာန်ရ ဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်တယ် မသိဘူး
အရေသွေးကိူလုံးဝမထိခိုက်ပဲနဲ့ လျှော့သွားတာများ မျတ်လှည့်ဆရာလားအောင်မေ့ရတယ်
ဟိ ကျေးဇူးအလန်းတင်တယ်ဗျာ..။။။အနော့် ဗိုက်က ကျွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်တာများလို့မသိဘူး
အတော့်ကိုပူလာတာ ကိုရဲမာန်ပြေားသလို အမြန်ဆုံးလျှော့ချလို့များရရင် မပင်ပန်ပဲနဲ့ ကိုရီယား မင်းသားတွေလို
ဘောဒီဖြစ်သွားမလားမသိဝူးနော် ဟိ ဘာမှလဲအဆိုင်ဝူး....နော်...
photo တစ်ပုံ ကို size ချုံ့မယ်ဆိုပြီး open with paint နဲ့ ဖွင့်ပြီး တော့ image ထဲ ကို ၀င်မယ်လုပ်တော့ image tool box က မီးမလင်းဘူး။??????? ဘာလိုနေလဲ မသိဘူး ?????
Windows7မှာပါတဲ့ Paint Program အတွက် ဆိုရင်တော့ Image ထဲက Resize သို့ဝင်လိုက်ပါ။
Resize and Skew Box လေးပွင့်လာပါမယ်။
အဲဒီ Box လေးရဲ့အပေါ်က Resize ထဲမှာမှ Percentage နဲ့ Pixel ဆိုပြီး (၂) မျိုးပါပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့ အမျိုးအစားကို ရွေးပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ အောက်မှာပါတဲ့ Maintain aspect ratio ဆိုတာလေးရဲ့ ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ် လေးဖြစ်နေရင် မူရင်းဓါတ်ပုံရဲ့ အလျား၊ အနံ အချိုးအတိုင်း ပြောင်းပေးပါမယ် ...။ ဆိုလိုတာက Horizontal ၁၀၀% ကို ၅၀% လို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ အောက်က Vertical ကလည်း ၅၀% လို့ အလိုလျောက် ပြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ Maintain aspect ratio ရှေ့က အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Horizontal နဲ့ Vertical ကိုကြိုက်သလို ရိုက်ထည့်လို့ ရပါတယ်။ ( Pixel မှာလည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ။)
အောက်က Skew (Degree) ကတော့ ပုံကို စောင်းတဲ့နေရာမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ Horizontal , Vertical ကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဒီဂရီ ပမာဏ ရိုက်ထည့်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ ....။
ငပြုံး, မြန်အောင်သား, bagothar85, Black Spider, tu tu, zo